राजनीति पैसाले होइन, सेवाले हुन्छ ! सेवाको राजनीतिले समृद्धि र सुशासन ल्याउँछ । पैसाको राजनीतिले समाजमा भ्रष्टता फैलाउँछ ।
पदलाई पैसामा साट्न बानी परेकालाई लाग्छ, ‘पैसा बीना राजनीति सम्भव छैन ।’ तर राजनीतिक इतिहास र अभ्यासले भन्छ, ‘राजनीति पैंसाले होइन, सेवाले हुन्छ ।’
विकास पैसाले होइन, भिजनले हुन्छ ।
जस्तो सोंच उस्तै विकास । बालुवामा पानी खन्याएजस्तो विकासले बालुवाकै जस्तो सोंचको संकेत गर्दछ ।
डोल्पा गरीब छ, डोल्पाली नेता धनी छन् ।
डोल्पाको राजनीति पैसासँग साटिएको छ । यस्तो बनाइएको छ कि, पैसाबीना राजनीति नै हुन सक्दैन । तर कुरा त्यसो होइन । जो पैसा बीना राजनीति सम्भव छैन भन्छन्, पद पैसामा साट्छन्, तीनैले राजनीतिबाट कमाउने गर्छन् । अर्थात् जनताले पाउनुपर्ने विकासको पैसा पनि उनैले कुम्ल्याउँछन् । अनि जनताकै पैसाको पर्खालमा उभिएरै जनतालाई नै लात निरन्तर हानिरहेका हुन्छन् ।
हाम्रै पैसा हातमा लिन्छन्, चुनाव र अरु बेला हामीलाई बाँडेर ऋणी बनाउँछन् । त्यसको गुण तिर्न हामी पनि फेरी उनैलाई जिताउँछौँ, अनि भ्रष्ट समाजको विकासमा सहभागिता जनाउन पुग्छौँ । नेता भनिएकाले हामीलाई ठगेर, हेपेर र फकाएर हामीबाटै चोरेको पैसाले हामीलाई नै लात हान्ने आँट गर्छन्, तर हामी तिनैलाई एक पटक पनि धोका दिन सक्दैनौं । फलतः तीनलाई लडाउन सकिने अवसर गुमाउँछौं ।
राज्यकोषबाट छुट्याइएको बजेट सदुपयोग भए विकास मौलाउँछ, दुरुपयोग भए भ्रष्टाचार ।
नेता पैसाले होइन, भिजन र व्यवहारले हुन्छ
डोल्पाको राजनीतिलाई हेर्दा डोल्पाली जनताको हित र भलाईका लागि केन्द्रीय राजनीतिमा कहिल्यै पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको देखिएन । बरु गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुले यसलाई कमाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरी राजनीतिको परिभाषा बिटोलिदिएका छन् । तिनैको केन्द्रीय नेताहरुसँग पहुँच बनेको छ । यसले साँठगाँठ संस्कारलाई स्थान दिएको छ । यही नै डोल्पाबासीको दुर्गतिको पहिलो कारक बन्यो । यसैको परिणामस्वरुप वर्षौदेखि राजनीतिमा आवद्ध व्यक्तिहरु राजनीतिकर्मीमा सीमित भए । न नेता बन्न सके न राजनीतिज्ञ । राजनीतिकर्मीले आफ्नो बाहेक अर्काको हितमा न सोँच्न सक्दैन । उसलाई आफू पालिने मात्र चिन्ता हुन्छ सधैँ । बिडम्बना यिनै राजनीतिकर्मीको बाहुल्यता रहेको छ हाम्रो डोल्पामा । यसले नयाँ नेतृत्व उदयको वातावरण धुमिल्याएको छ ।
नेता त्यो हो जसले नागरिकहरुलाई आफ्नो क्षमता र सीपको प्रयोग गर्दै उच्च जीवन जीउन प्रेरित गर्छ, नागरिकको समस्यालाई आफ्नै समस्या मान्छ र समाधान गर्छ । सम्पूर्ण डोल्पालीले समृद्धिको उडान भर्न सक्ने कच्चा पदार्थहरु तयार छन् । ज्ञान, क्षमता, सक्षमता र इमान्दारीता भएका व्यक्तित्वहरुको पनि कुनै कमी छैन । कमी छ त एउटै- राजनीतिक नेतृत्वको छ, जसले प्राकृतिक स्रोतसाधन र त्यसको सदुपयोग गरी सम्पूर्ण डोल्पालीहरुको हित गर्न सक्ने मानव संशाधानबीचको पुल बन्न सकोस् ।
हरेक गाउँटोल बनाउने र जनसेवामा लाग्ने नेतृत्वको पहिचान, प्रवर्द्धन र विकास गरी सच्चा नेतृत्व बनाउन सक्ने पार्टीको आवश्यकता पनि छ जसले कुनै एक व्यक्ति बनाउने होइन, सम्पूर्ण डोल्पालीलाई बनाउने चाहना राखोस्, र त्यो पुरा गर्न लागि परोस् । यी सबै कुरा सफल तुल्याउन केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने र सहज पहुँच बनाउन सकोस्, त्यो प्रभाव र पहुँच जनहितमा लगाउन सकोस् ।
पार्टीको लक्ष्य सेवा हो, व्यापार होइन
कुरा कुनै व्यक्ति बन्नुको होइन न त कुनै पार्टी बनाउनुको नै हो । यो त डोल्पा बनाउनुको हो । वर्षौदेखि दुर्गमताको भार बोकिरहेको डोल्पालाई सुगमताको स्वाद दिने हो । बृहत्त भूगोलभित्रका छहरिएर रहेका हामी डोल्पालीहरुको जीवनस्तरलाई उकास्ने हो । केही व्यक्तिमात्र होइन, समग्र डोल्पाबासीको हितमा हुने राजनीतिक संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नु हो ।
जालझेलको राजनीतिले जगडिएको डोल्पामा असक्षमता, भ्रष्टता र बेइमानीले उकुसमुकुस बनाएको छ । एक व्यक्ति वा कुनै एक पार्टीलाई फाइदा दिन हजारौं जनतालाई चोट पुर्‍याउने काम भएको छ । बदल्नुपर्ने यही छ । त्यसका लागि राजनीतिलाई सफा बनाउनु जरुरी छ । कुनै नेता र पार्टी के का लागि ? समाजको सेवाका लागि हो । सेवामा विश्वास नगर्ने र अभ्यासमा पनि नलाग्ने पार्टी र व्यक्तिको राजनीतिमा कामै छैन ।
चुनाव पैसाले होइन, मतले जितिन्छ
‘जति पार्टी आएपनि काम छैन’ भनेर भ्रम फैलाउन पनि तीनै खाइपल्केका पार्टीका कार्यकर्ता र राजनतिकर्मीले नै हल्ला फैलाउँछन् । कुनै व्यक्ति राजनीतिमा लाग्न थाल्यो भने भनिन्छ, मान्छे त राम्रै हो तर उसँग पैसा छैन । एक पटक सोँच्नुहोस् त, ‘के तपाईलाई साँच्चिकै चाहिएको पैसा नै हो त ?’
कतिले भन्छन्, ‘राजनीति गर्न पैसा चाहिने त होइन तर अशिक्षित जनताको कारण चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ ।’ फेरी एकपटक आफैलाई सोध्नुहोस्, ‘के चुनाव जित्न पैसा नै चाहिने हो ? के अशिक्षितले नै पैसा खाएर भोट हाल्छन् ?’
अहिले भइरहेको गतिविधि र व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र त्यसैमा रमाइरहनु भएको छ भने हामीले भन्नु केही छैन । रमाइलो गर्नुस् । तर होइन, तपाई परिवर्तन चाहनु हुन्छ भने अहिले नै तय गर्नुस्, जसले आफुले खाइपिई आएको पद, पैसा र शक्ति गुमाउन नचाहेर गरेको हल्लाको पछि होइन, परिवर्तनको पक्षमा लाग्नुस् । परिर्वनमा लागेका मान्छेको भरमा मात्र नपर्नुस्, आफैं परिवर्तनकारी बन्नुस् ।
हाम्रो लक्ष्य र अभिभारा नै, राजनीतिमा आएको विकृतिको नष्ट गर्ने हो । राजनीति पैसाले होइन, सेवाले हुन्छ, भन्ने प्रमाणित गर्ने हो । हामीलाई थाहा छ, तपाईको भित्री मनले पनि यही भन्छ । हामी मात्र एउटा कुरा भन्छौं, आफैंलाई सुन्ने क्षमता राख्नुस्, मनले भने अनुरुप गर्ने आँट गर्नुस्, व्यवहारबाटै अरुलाई पनि प्रेरित गर्नुस् । अनि हेर्नुस्, परिवर्तन सम्भव छ ।
तपाई हामी मिलेर डोल्पाबाट जिल्लालाई नेतृत्व दिने नेता खोजेरै छाड्नेछौँ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपना पुरा गरेरै छोड्छौं ।
जिउँदो जाग्दो डोल्पा
परिवर्तनका बाहक बन्ने जिम्मेवारी विशेषत युवा पुस्ताको काँधमा जान्छ । अवसर पाए, आफ्ना क्षेत्रमा तहल्का मच्चाउन सक्ने सक्षमता सबैसँग हुन्छ तर त्यसको लागि अनुकूल वातावरण चाहिन्छ । अहिले आफूसँग भएको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई प्रयोग गर्न अरुको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिकर्मीका झोले पनि बन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो उदाउँदो नयाँ पुस्ताले सोँच्नुपर्ने कुरा हो । आफुभन्दा माथिल्लो तहको सीप, क्षमता र विचार भएकोलाई नेतृत्व तहमा स्थापित गर्ने । न कि आफूभन्दा लम्फूलाई पुज्नु । लम्फु र हुतिहाराहरु नै गरीबले राजनीति गर्ने आँट नगरोस् भन्ने मनसायले पनि पैसाको धाक लगाउने गर्छन् । यो सरासर सच्चा नेतृत्व जन्मिने बाटो बन्द गर्ने रणनीति नै हो ।